ဒေါသစိတ်ကြောင့် လူသတ်မှုနဲ့ တရားစွဲခံလိုက်ရတဲ့ မေဇွန် Thursday, September 13, 2012 အိမ့်သံစဉ်3comments ဒေါသအလျောက် ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘာဝက အခုတော့ လူသတ်မှုနဲ့ တရားစွဲ ခံလိုက်ရတဲ့အဖြစ် အထိ ရောက်သွား ခဲ့တယ်။ MRTV4က ရုပ်သံ ဇာတ်လမ်းတွဲအတွက် သရုပ်ဆောင်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံထားရတဲ့ မမေဇွန် ခေါ် မျိုးဇာနည်ဇွန် ဆိုတဲ့ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး တယောက်က အိမ်ဖော်မိန်းကလေးငယ် ကို နှိပ်စက် ရာက ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်မှာ လူသတ်မှုအဖြစ် ပြောင်းလဲ တရားစွဲမှုခံလိုက်ရတာပါ။
သေဆုံးသွားတဲ့ မနုနုလွင်ဆိုတဲ့ အိမ်ဖော်မလေးကို သူကိုယ်တိုင် သတ်လိုက်တယ်လို့ အိမ်ရှင် မမေဇွန်က ၀န်ခံလိုက်တဲ့ အကြောင်း ပြည်တွင်း သတင်းဂျာနယ်တွေနဲ့ နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွေမှာ ဖော်ပြပါလာပါပြီ။
လွန်ခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့က မမေဇွန် ခရီးသွားပြီး ပြန်လာမှ ကမာရွတ်မြို့နယ်က သူ နေထိုင်ရာ တိုက်ခန်းပေါ်တက်၊ ပြေးဆင်းပြီး ရပ်ကွက်ကို အကူ အညီတောင်း ရဲစခန်းအကြောင်းကြားလို့ ပုပ်ပွနေတဲ့ အိမ်ဖော်မလေးရဲ့ အလောင်းကို ရဲတွေက တွေ့ရှိပြီး ပထမတော့ လူသေမှုနဲ့ ရဲက အမှုဖွင့်ထားခဲ့တာပါ။
ဒါပေမယ့် သံသယဖြစ်စရာ အလောင်းက ဒဏ်ရာတွေနဲ့ကြောင့် အိမ်ရှင် မေဇွန်နဲ့ နောက်ထပ် အိမ်ဖော် မလေး ဖြစ်တဲ့ အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် မဇင်ဇင်ထိုက်ကို စစ်ဆေးရင်းက အခုလို လူသတ်မှုကို ၀န်ခံ ထွက်ချက်ပေး လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ ရန်ကုန်တိုင်း ရဲမှူးက ပြောပါသတဲ့။
မေဇွန်က အိမ်အကူ မိန်းကလေးကို စိတ်မထင်ရင် မထင်သလို ဆံပင်ဆွဲ ခေါင်းနဲ့ နံရံဆောင့်တာ၊ တုတ်နဲ့ ရိုက်တာ၊ ဗိုက်ပေါ် တက်ခုန်တာ၊ အိမ်ဖော်ချင်း ရိုက်ခိုင်း တာတွေလည်း လုပ်တယ်လို့ စစ်ဆေးချက်တွေမှာ သိရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တကယ်တော့ မေဇွန်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့က MRTV-4 က စီစဉ်ရိုက်ကူးတဲ့ Flowers & Butterflies ဇာတ်လမ်းတွဲ မိတ်ဆက်ပွဲကို လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲကို ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ၊ (၈) ရက်နေ့က Park Royal Hotel, Ballroom ခန်းမတွင် နံနက် (၁၀) နာရီမှ နေ့လည် (၁၂) နာရီအထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့စဉ်က မေဇွန်ဟာ ယောကျာ်း စိတ်ပေါက်နေ တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ဦး၊ ယောင်္ကျား စိတ်ပေါက်နေပေမယ့် နှလုံးသား နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီး သူတပါးကို ကူညီ တတ်သူ၊ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ခင်တွယ် တတ်တဲ့ “ဆာကူရာ”အဖြစ် သရုပ်ဆောင်မယ့်အကြောင်း မိတ်ဆက် ကြော်ငြာခံခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲက သရုပ်ဆောင်ရမယ့် ဇာတ်ရုပ်နဲ့ တခြားစီဖြစ်ပြီး လူသတ်မှုနဲ့ တရားစွဲခံလိုက်ရပါ တယ်။ သူရဲ့ ဇာတ်ရုပ်နေရာအတွက်လည်း သရုပ်ဆောင်သစ် နောက်တဦး ရွေးချယ်တော့မယ်လို့လည်း ဒါရိုက်တာက ပြောလိုက်ရပါ ပြီ။
ခဏတာဖြစ်တတ်တဲ့ ဒေါသ စိတ်ကလေးက မေဇွန်ရဲ့ ဘ၀ တာ ကို ပြောင်းလဲ သွားစေခဲ့ပြီလား။
ဓာတ်ပုံ-Beautiful model world.com
မှတ်ချက် - ယခင် ပေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ခေါင်းစဉ်က "ဒေါသစိတ်ကြောင့် လူသတ်တရားခံ ဖြစ်သွားတဲ့ မေဇွန်" ပါ။ တင်ပြီး နာရီပိုင်းအတွင်း ခေါင်းစဉ် ပြန်ပြောင်းလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Posted by
idmovie13 September 2012 01:29Visithttp://id-movie.blogspot.com/ReplyDeletethura aung4 July 2013 22:06ဒီ ‌ကောင်‌မအ‌သေစား အ‌သေခိုင်းရမယ်‌။ဒါမှမဟုတ်‌ ဖင်‌သက်‌ ‌စေ့လိုးပြစ်‌ရမယ်‌...ReplyDeleteAdd commentLoad more...
Contraceptives and breastfeeding နို့တိုက်မိခင်များအတွက် ကိုယ်ဝန်တားဆေးများ ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေက နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ ...
ကြိုက်ကုန်းတစ်ယောက် စက်ပတ်ပါ အရမ်းလိုးချင်သူများ အားချိတ်ပေးမည် (no title)
ဒီအရွယ်လေးတွေနဲ့ဗျာ။ http://cumflow.com/forum/forumdisplay.php?fid=45 ဒီကိုသွားပြီး အသက်ဆယ်နှစ်လောက်ရှိတဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်လိုးတဲ့ကားသစ...
X X X MYANMAR (2)
ဒီအာရပ်ကားလေးကိုမှ မကြိုက်ဘူးဆိုရင် ခင်ဗျားပုန်းနေပြီ။ CLICK HERE TO DOWNLOAD NOW! ဒီမှာဒေါင်းသွားပါ (no title)
ရွေတြိဂံနယ်မြေ အပိုင်း (၂)
Time in Yangon - ပြက္ခဒိန်
myanmar sexy dancer
ZAW GYI FRONT IS HERE
zawgyi font Download (1.32 MB) mgmin86@gmail.com(admin)
ပါးပြင်မှာ သနပ်ခါးလေးနဲ့@achittatkatho
မြန်မာစစ်စစ်ကျောင်းသူလေးများ credit -'Mr...
ဒူးလောက်ရှည်ရဲ့လား (ဟာသ)ရဲ့ နောက်ဆုံးအ...
Q and A Over 18 Readings (75)1. တီဘီဆေးသော...
Cute Patricia in Pinky Strapless Top & Sho...
Nay Toe & Patricia (Sue Sha Naing)Myanmar...
Photos: The Romantic Wedding Fair 2012 in Yangon
ကိုယ်တိုင်ရိုက်ပို့ လိုက်တာတဲ့ ၂အရင်တခါ ရိုက်ပို့ ...
Unknow Myanmar Sexy Girl
Photos: Pretty Models @ OXY Cosmetics Prod...
Q and A Over 18-Readings (74)1. အိမ်ထောင်သ...
Rich Gems Promotion Fashion Event
Photos: Htet Htet Moe Oo's Family @ Father...
Sex helps elderly women (ဆက်က်စ်) ဟာ အမျို...
Pretty Model Ei Chaw Po in Black & White Stripe Mi...
Photos: "Eain Mat Sone Yar" Season2Final Contest...
Q and A Over 18-Readings (73)1. ဆရာမကြီးခင...
မလေးပုလွေDOWNLOAD HEREDOWNLOAD HERE@dotegyimg
ကြောကောင်းသောမလေးမDOWNLOAD HEREDOWNLOAD HERE @d...
Fertilized egg ကလလရည်ကြည် Wed, Sep ...
ခရစ္စတီးနား @mm beer
ဆွဲမယ် CREDIT - Wanker@nyamintharx.ne...
WebCam,Skype,Vzo,ooVoo, များမှမြန်မာမလေးများ ...
Photos: MC Jeans Product Promotion Event in Yangon...
Wyne Su Khine Thein @ Rich Coffee Mix's ...
Photos: The Most Amazing Exhibition & Ca...
Q and A Over 18 Readings (72) 1. ဆီက...
japan collage school girl group
Photo Model & Vocalist Wati's Hot Fashio...
ကျတော်နဲ့ထို နှစ်ယောက်
Q and A Over 18 Readings (71) 1. ကို...
ဆန်းသစ်လ @myanmar beer
ဒေါသစိတ်ကြောင့် လူသတ်မှုနဲ့ တရားစွဲခံလိုက်ရတဲ့ မေ...
Q and A Over 18 Readings (70) 1. ရင်...
Tilted uterus သားအိမ်စောင်းနေခြင်း U...
Model Su Myat Noe Oo in Pretty ...
ကိလေသာအရှုပ် ဘယ်သို့တွင် ခုတ်ရပါ့
၁၉၄၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်နေ့ထုတ် “ဂျာနယ်ကျော်
MISSHA Cosmetics Shop Opening in Yangon စက်တင်ဘာ...
NIVEA Invisible for Black & White Promotion Event
Over 18 Readings (69) 1. ကိုယ်ဝန်မရှိ...
ကျွန်တော်နှင့် ရင်ခုန်ဖွယ် မိန်းမပျိုလေးများ
Breast self examination ရင်သားအား မိမိဖါ...
Q and A Over 18 Readings (68) 1. အဆု...
ခေတ်မီတာလား mail ထဲကို အောက်ပါအတိုင်းရေးပို့ လာ...
Myanmar Hot Model Pinky Ko in Sexy Top &...
Q and A Over 18 Redings (67) 1. ကလေး ...
Model Myat Moht Moht Theint in Hot Strap...
တက္ကသိုလ်နေ၀င်း - သူလိုမင်းသမီး
ရောင်းရင်းများအတွက်လူရမ်းကား. Powered by Blogger.